HomeWararka CiyaarahaArsenal oo 3 milyan Ginni kula soo wareegtay Sao Paulo Marquinhos
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ogolaatay inay la soo wareegto weeraryahanka Sao Paulo Marquinhos heshiis ku kacaya €3.5m (£3m).
Tan iyo markii uu u soo biiray kooxda koowaad ee sannadkii hore, 19-sano jirkaan ayaa durbaba u saftay 39 kulan oo waaweyn kooxda reer Brazil, isagoo u dhaliyay afar gool, halka seddex kalena uu dhigay.
Hormar xilli ciyaareedkii 2021 ayaa la arkay Marquinhos ayaa 21 kulan ka soo muuqday horyaalka Serie A ee Brazil – isagoo ku soo bilowday shan ka mid ah – halka uu sidoo kale gool dhaliyay oo caawiyey wareegii 16-aad ee Copa Libertadores oo ay la ciyaareen Racing Club.
Da’yarka ayaa mar hore khibrad ka helay Copa Sudamericana intii lagu jiray marxaladihii hore ee xilli ciyaareedka 2022, waxaana uu seddex jeer u saftay Brazil isagoo ku jira Under-17.
Heshiiska wiilkan uu kula jiro kooxda Serie A ka dhisan ayaan dhamaanayn ilaa xagaaga 2024, laakiin sida laga soo xigtay Sport Witness , Arsenal ayaa qarka u saaran inay ku iibiso qiimo jaban sababo la xiriira dhibaatooyinka qandaraaska.
Ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ayaa saxiixay heshiis shan sano ah sanadkii 2019 markaasoo uu ahaa 16 sano jir, sidaas darteed, FIFA ayaa u ogolaatay kooxda inay sii haysato seddex sano oo keliya marka loo eego xaaladiisa da’da yar.
Intaa waxaa dheer, iyada oo hanjabaad dhanka sharciga ah oo dhanka ciyaaryahanka ah, Sao Paulo ay cadaadis ku saaran tahay inay iska iibiso ka hor inta aysan si xor ah ku lumin – taasoo u ogolaaneysa Arsenal inay si dhaqso ah u soo gasho.
Warbixinta ayaa sheegeysa in qiimo lacageed dhan €3.5m (£3m) ay horey ugu heshiiyeen labada kooxood, laakiin Mikel Arteta ayaan la fileyn inuu ku soo biiriyo kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Marquinhos ayaa la filayaa inuu filan karo in amaah lagu diro si uu u sii wato horumarkiisa, isagoo si ku meel gaar ah ugu wareegaya Spain xaalada ugu macquulsan ee ololaha 2022-23.
Si kastaba ha ahaatee, xilli ciyaareed cajiib ah ayaa weli ku qancin kara Arteta inuu u dhiibo Marquinhos fursad uu ugu biiro kooxda koowaad sanadka soo socda, sida kiiskii Gabriel Martinelli .